LEGO Looney Tunes Collectible Minifigure စီးရီးများကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
03 / 04 / 2021 03 / 04 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 1684 Views စာ0မှတ်ချက် 71030 Looney တီးလုံး, အုတ်ဖို, bugs Bunny, CMF, စုဆောင်း Minifigures, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Daffy ဘဲ, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, looney သီချင်းများ, အမ်ဗင်artIan, ဝက်ဝက်, Tasmanian Devil, time Warner, Warner Bros, Warner Bros.
လာမည့် စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီးများကို Looney Tunes အနေဖြင့်အစောပိုင်းဖြန့်ချိမှုကြောင့်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး Bugs Bunny နှင့် Daffy Duck ကဲ့သို့သောကာတွန်းရုပ်ပုံများပါဝင်သည်။
A အုတ်အဖွဲ့ဝင် မြောက်ကာရိုလိုင်းနားရှိလွတ်လပ်သောစတိုးဆိုင်တစ်ခုတွင်ထွက်နေစဉ်နှင့်စီးရီးများအပြည့်အဝအစုံလိုက် ၀ ယ်ယူပြီးထိုစီးရီးကိုကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ခဲ့သည်။
71030 Looney တီးလုံး minifigures စုဆောင်းရန်စုစုပေါင်း 12 နှင့်အတူစုဆောင်းဇာတ်ကောင်အသစ်အကွာအဝေး၏ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီးရီးမှာတွေ့နိုင်တဲ့သေးငယ်သောအရာများအားလုံးဒီမှာပါ။
အသစ် minifigure စီးရီးထိုကဲ့သို့သောအတူလူကြိုက်များဖွယ်ရှိသည် classic နှင့်မှတ်မိလောက်သောဇာတ်ကောင်များကိုပထမဆုံးအကြိမ် minifigure ပုံစံဖြင့်ပြန်လည်ဖန်တီးထားသည်။ ဆိုလိုတာကဘယ်သူက Petunia ဝက်ကိုမမှတ်မိဘူးလဲ။ Lola Bunny သည်ဘတ်စကက်ဘောနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအသွင်အပြင်ကိုလည်းပြုလုပ်သည် အာကာသ Jam 2.
Brickset အသင်း ၀ င်တစ် ဦး သည်သူ၏ ၀ ယ်ယူမှုအတွက်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းတစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင်အသေးစားပုံစံတစ်ခုစီသည် ၅.၉၉ ဒေါ်လာကျသင့်မည်၊ အသက် 71029 စီးရီး 21 ဒေါ်လာ ၄.၉၉ ကျသင့်သဖြင့်အခြားဒေသများတွင်မည်သို့ထင်ဟပ်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။
ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းမှသေတ္တာထဲတွင်ပါ ၀ င်သောအသေးစားဓာတ်ပုံ ၃၆ ခုပါ ၀ င်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာစီးရီးများသည်ကတ်ထူသေတ္တာများနှင့်မတူဘဲသတ္တုပါးအိတ်များနှင့်ကပ်နေလိမ့်မည်။ ၄၃၁၀၈ Bandmates, ဇာတ်ကောင် 24 ပါရှိသော။
ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုလေ့လာသင်ယူသည့်အချိန်တွင်၊ အသစ်အသစ်သောအချိန်အပါအဝင်သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့မွမ်းမံပါလိမ့်မည် စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီးကိုဖြန့်ချိလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ထိုအတောအတွင်းအတွက်အားလုံးရှေးရှေး!
← ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: The Amazing Spider-Man
တည်ဆောက်နိုင်သော LEGO Adidas နည်းပြသည် ၂၀၂၁ ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ကောလဟာလသတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သည် →